အရွယ် 15.8 ကို MB
downloads ရယူရန္4909
အန်ဒ Chancel (Restauravia.com)
အဆိုပါ Fouga Zephyr နှစ်ခု configurations အတွက်ပေးအပ်သည်:
- တစ်လေယာဉ်မှူးနှင့်အတူ "တစ်ကိုယ်တော်" configuration ကို
- ဘုတ်ပေါ်နှစ်ဦးလေယာဉ်မှူးနှင့်အတူ ie "ကို dual ထိန်းချုပ်မှု" configuration ကို, ဒီမော်ဒယ်အနောက်ဘက်ထိုင်ခုံမှမောင်းနှင်သောဖြစ်ပါတယ်
က virtual လေယာဉ်မှူးများအတွက်သူ့ရဲ့အသုံးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်:
- အစစ်အမှန် Fouga ဘရိတ်နှင့်အတူမြေပြင်ပေါ်တွင်မောင်းနှင်နေစဉ်နှာခေါင်း gearwheel steerable ဖြစ်ပါသည်
- တစ်ဦး GPS စနစ်, တစ်ဦး VOR / DME နှင့်တစ်ဦးအလိုအလျှောက်လေယာဉ်မှူးနှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များမှာစတင်မိတ်ဆက်နေကြတယ်
- တော်တော်များများဖြည့်စွက်အလင်းအိမ်ကို virtual ပျံ (ခတ်, ဆင်းသက်ဂီယာ, airbrakes) ဖြေလျှော့ဖို့ panel ကိုအပေါ်ထား
သူ၏ "ကြီးကျယ်သော-အစ်ကို", အ Fouga Magister လေယာဉ်အဖြစ်ကျော်ကြားဘဲ, အ Fouga Zephyr အ Fouga ၏ရေတပ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစု၏အစအဦးမှာပြင်သစ်ရေတပ်မန်နေဂျာ, သူတို့ရဲ့လေယာဉ်မှူးလေ့ကျင့်များအတွက်အမျိုးသားရေးလမ်းရှာဖွေခြင်း, ပြင်သစ်လေတပ်များအတွက်တိုးတက်မှုအတွက် Fouga အစီအစဉ်အားဖြင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ရေတပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တစ်ခုအဆင်ပြေအောင် version ကိုတည်ဆောက် 1956 ဇူလိုင်လ 31 "Esquif" အမည်ရှိပထမဦးဆုံး Fouga CM170M ရှေ့ပြေးပုံစံပေါ်တွင်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ 30 လေယာဉ်၏တစ်ဦးကဝယ်ယူအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်နှင့်ပေးပို့ 1959 နှင့် 1961 အကြားလှပတဲ့ခဲ့သည်။ ဒီလေတိုက်နှုန်း '' အမည်များကို အသုံးပြု. ဤအချိန် (Aquilon, Alize) မှာအခြားပြင်သစ်ရေတပ်၏လေယာဉ်နှင့်အညီ CM175 "Zephyr" ဟုအမည်ပြောင်း, ဒီလေယာဉ်ပျံဗားရှင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောဝယ်ယူမိန့်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး Fouga Zephyr အဓိကအားဖြင့် Foch နှင့် Clemenceau လေကြောင်းလိုင်းနှင့်တကွ, ပြင်သစ်ရေတပ်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပိုပြီးထက်အနှစ်သုံးဆယ်အတွင်း Zephyr ပြင်းထန်တဲ့အသုံးအခြေအနေများအောက်တွင်၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကြံ့ခိုင်အရည်အသွေးတွေကိုပြတော်မူပြီ
ပြင်သစ်ရေတပ်အားဖြင့် 1961 ဖန်တီး Zephyrwas ပျံသန်းတစ် aerobatic အသင်း
အ airframe အထူးအင်္ဂါရပ်ထောင့်လိပ်ပြာအမြီး°တစ် 110 လည်းပါဝင်သည်
ထင်ရသောအလွန်အ Fouga Magister လေယာဉ်ပျံနဲ့ဆင်တူခြင်း, Zephyr သို့သော်အရေးကြီးသောအသွင်ပြောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့:
- airframe စစ်ကူ
- "Over-ဖောင်းပွ" နှာခေါင်းဂီယာရှော့ခ်ကိုစုပ်ယူဘို့အထူး function ကိုအပါအဝင်အားဖြည်ဆင်းသက်ဂီယာ
- လျှောမြတ်သောအဖွင့်လှစ်မြတ်သောနှင့်အတူလောက်လွှဲ မှနေ. စတင်နှင့်ဆင်းသက်ခွင့်မှ
- အမြီးချိတ်နဲ့လောက်လွှဲ မှနေ. စတင်စဉ်အတွင်းလိုက်တာနဲ့များအတွက် devices များ
- တစ်ဦးကတိကျမှန်ကန်တင်သင်္ဘောဆင်းသက်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တိုက်ခိုက်ညွှန်ပြချက် (BIP) ၏ထောင့်
အဆိုပါ Fouga Zephyr နှစ်ခု Marbore II ကိုအင်ဂျင်ရှိပါတယ်
3450 ကီလိုဂရမ်လောက်လွှဲ မှနေ. အမြင့်ဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်
အများဆုံးတွန်းကန်အား (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်) 400 ဒန် (x2)
အများဆုံး RPM 22600 rpm ပါ
(5ource: အင်္ဂလိပ်စာရွက်စာတမ်းများမှာ download တွင်ထည့်သွင်း)
2D ပြားများနှင့်အထွာ: Jean-Pierre Langer
နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေး: Claude မာရီ (ဟောင်းတစ်ဦး Fouga Zephyr နည်းပြဆရာလေယာဉ်မှူး)